Himalaya Dainik » कोरोना शंकास्पद बिरामी मृत्यु: स्वाब संकलनमै ‘लापर्बाही’, खुलेन कारण
काठमाडौँ — प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले स्वाब संकलन गरी तुरुन्तै काठमाडौं नपठाएका कारण बुटवलको धागो कारखानामा स्थापित आइसोलेसन अस्पतालमा राखिएका व्यक्तिको मृत्युुको कारण अझै खुल्न सकेको छैन । निर्देशनालयले एक जनाको मात्रै स्वाब (थुक र खकारको नमुना) काठमाडौं पठाउँदा खर्च धेरै लाग्ने भन्दै तुरुन्तै काठमाडौं पठाएको थिएन । बिरामीमा देखिएका लक्षणबारे चिकित्सककै भनाइ बाझिएका छन् ।
बुटवलबाट एकैपटक ७/८ जनाको स्वाब संकलन गरेर पठाउने गरिएको पाइएको छ । त्यसको परिणाम स्वास्थ्य निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिरामीको मृ’त्युको कारण खुलाउन सकेका छैनन् । आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको आइतबार दिउँसो मृ’त्यु भएपछि त्यसको कारणबारे जानकारी लिन खोज्दा सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल, स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरी, बुटवल कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालका डा. सुदर्शन थापालगायत जिम्मेवारी व्यक्ति पन्छिएका छन् ।
अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा चार दिनदेखि उपचार गराइरहेका पाल्पाको रिब्दीकोट–५ घर भई रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–४ सिसौंडाँडा बस्दै आएका ३४ वर्षीय बाबुराम थापाको मृ’त्यु भएको थियो । सिसौंडाँडाका स्थानीय एवं थापाका छिमेकी दीपक अधिकारीका अनुसार उनी दुबईमा ट्याक्सी चालक थिए । उनी चैत ६ गते दुबईबाट काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौंबाट बस चढेर चैत ७ गते परिवारको सम्पर्कमा आए । चैत १० गतेदेखि उनलाई ज्वरो र खोकी लाग्न थालेपछि स्थानीयकै सल्लाहमा चैत ११ गते स्थानीय मेडिकलमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए । सुरुमा टाइफाइडको औषधि खाए । निको नभएपछि चैत १३ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
२७ वर्षीया श्रीमती रीताले समेत अन्तिम अवस्थामा मात्र जानकारी पाएको बताइन् । थापाको मृ’त्युपछि उनी भाडामा बस्दै आएको घरमा रहेका अन्य १० जना पनि तनावमा छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहिलमा अहिले सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रत्येक दुई दिनको फरकमा स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाउने गरिएको बताए । ‘हामीले १३ गते अन्य व्यक्तिको पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘१४ र १५ गतेको संकलन गरेर आजै पठाइएको छ ।’ टेकुमा पनि उस्तै चाप रहेकाले छिटो पठाएर पनि तत्काल परीक्षण सम्भव नहुने उनले बताए । ‘तर यो केसको प्राथमिकतामा राखेर भोलि (सोमबार) २ बजेभित्र नै रिपोर्ट दिन भनेका छौं,’ उनले भने । आर्थिक भारभन्दा पनि स्वाब लैजाने सवारी साधन र टेकुको प्रयोगशालामा बढ्दो चापका कारण समय कुर्नुपरेको उनले दाबी गरे । यो समाचार कान्तपुर दैनिकमा घनश्याम गौतमले लेखेका छन् ।